Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Chelsea Oo Dalab Ka Gudbineysa Haaland, Man United Oo Fursad U Heshay Ronaldo Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo dalab ka gudbineysa Haaland, Man United oo Fursad u heshay Ronaldo iyo Qodobo kale
July 8, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Chelsea ayaa diyaar u ah inay 150 milyan oo ginni ku dalbato weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, kooxda ka dhisan Stamford Bridge ayaa durbaba wadahadalo la yeelatay 20 jirkaan reer Norway. (90min)
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso bedelka daafaca Real Madrid Raphael Varane . sida ay qortay AS
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ogolaatay inay la saxiixato da’yarka Los Angeles Galaxy Alejandro Alcala waqti dambe. sida laga soo xigtay ESPN
kooxda Manchester United ayaa fursad u heleysaa in ay dib ula midoobaan xidiga kooxda Juventus ee CR7 hadii xidigan uu heshiis u saxiixin kooxda juventus, marwada duqa ayaa dhankeeda calaamadeysatay xidiga badalka u noqon kara ronaldo kaasi oo ah Dusan Vlahovic . Sports mole
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdu aysan “awoodi karin” weeraryahan cusub marka la fiiriyo qiimaha la weydiinayo, “waxaa jira fursad badan” kooxda heysata Premier League ma iibsan doonto weeraryahan kale. (Dailymail)
Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa u sheegay kooxda inuu jeclaan lahaa inuu la soo saxiixdo weeraryahanka reer Brazil Richarlison, oo 24 jir ah oo ka yimid kooxdiisii ​​hore ee Everton , kooxda ka ciyaarta La Liga ayaana eegi doonta hadii heshiiska uu suurta gal yahay. (ESPN)
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay weli kalsooni ku qabto inay lasoo saxiixato Brighton & Hove Albion Ben White xagaagaan inkastoo dhawaanahan la isla dhexmarayay daafaca dhexe inuu ku biirayo Gunners.
Wakiilka ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea Jorginho ayaa sheegay in ay xiiseynayeen ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Italy laakiin 29 jirkaan ayaa doonaya inuu kala hadlo heshiis kordhintiisa kooxda Blues wixii ka dambeeya 2023. (Metro)
Arsenal ayaa xiiseyneysa saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon iyo France Houssem Aouar, oo 23 jir ah, laakiin waxay u baahan tahay inay marka hore iska iibiso qadka dhexe. (ESPN)
Kabtanka RB Leipzig Marcel Sabitzer, oo 27 jir ah, ayaa lagu heli karaa ilaa 17 milyan oo ginni, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Austria uu galayo 12kii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa, isla markaana wadahadaladii heshiis kordhinta uu hakad ku jiro. (90min)
Paris St-Germain ayaa u muuqatay inay si qalad ah u xaqiijisay saxiixa 35 jirka daafaca dhexe ee reer Spain Sergio Ramos, kaasoo ka tagay Real Madrid ka dib dhamaadka qandaraaskiisa, iyagoo maqaal ku daabacay bogga kooxda ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin. dhaqaaq, taas oo la filayo Khamiista. (Goal)
Tottenham ayaa raadineysa daafaca Sassuolo Mert Muldur, iyadoo West Ham sidoo kale la sheegayo inay xiiseyneyso 22 jirka reer Turkey. (Dailymail)
Tababaraha cusub ee Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa amaan kala dul dhacay Leon Goretzka iyadoo ay jiraan soo jeedinno sheegaya in Manchester United ay dooneyso inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Sportsmole
Tababaraha Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa sheegay in 26 jirka khadka dhexe ee Jarmalka Leon Goretzka, oo lala xiriirinayo Manchester United inuu yahay “ciyaaryahan” muhiim u ah kooxda, uuna “ku farxi lahaa inuu la shaqeeyo sannado badan”. (Goal)
AC Milan ayaa sare u qaadi doonta dalabkeeda ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Ivory Coast Franck Kessie iyagoo isku dayaya inay 24 jirkaan qandaraaska u kordhiyaan. (Gazzetta dello Sport)
Daafaca Talyaaniga Davide Calabria, oo 24 jir ah, ayaa ogolaaday qandaraas cusub oo soconaya ilaa 2025, oo uu kula joogayo AC Milan. (Football Italia)